Sajhasawal.com.np |बजार झरेकी आमाको बोली फेरिएन (मुक्तक)
बजार झरेकी आमाको बोली फेरिएन ।
लगाउदै गरेको उनको चोली फेरिएन ।।
खुसिको महलमा राख्न्ने भनेर छोराले ।
हिड्यो प्रदेस आमाको झोली फेरिएन ।।
हरेक साँझ पिउनुको नि कारण छ ।
मरे जसरी जिउनुको नि कारण छ ।।
चोटै-चोटले यो मुटु टुक्रा टुक्रा पार्यौ ।
टुक्रेको मुटु सिउनुको नि कारण छ ।।
गूलाफ भन्दा पहिले मन दिन्छू हून्न ?
संगै जिऊन्ने संगै मर्ने बचन दिन्छू हून्न ??
टाढा हूने धोको छैन समिप मै बाच्नुछ ।
नशामय हृदयको कम्पन दिन्छू हून्न ??
बाऊको पैसा चोरेर बजारतिर लागियो ।
सय/दूई सयले पूगेन हजार, तिर लागियो ।।
बाऊले पढ भनेनकै हून् ऊबेलामा ।
केटि खोज्दै उनको नजरतिर लागियो ।।
कलम होकि कापि चिन्है गारो छ ।
आज-भोलि हतियार बोकि हिन्नै गाह्रो छ ।।
पूलिस छोब्दै हूल्छन् विप्लव भनि
एऊटा ग्रुप लिएर भिड्नै गाह्रो छ ।।
- ललित बिष्ट
ठेगानाः आठबिस नगरपालिका ५, दैलेख